Rita, Writing for My Sake!: Current Situation in My Workplace
Current Situation in My Workplace
အရမ်းကို အလုပ်များတာ မှတ်မှတ်ရရ Crisis သတင်း စကြားပြီး ကတည်းကပဲ
ဆိုတော့ .. ၁ လလောက် ရှိရောပေါ့
အရင်ကမှ ရုံးမှာ အနည်းဆုံး တပတ် တရက်လောက်တော့ လပ်ရားလပ်ရား လုပ်နိုင်သေးတယ်
ခုတလော ဘယ်လို ဂြိုဟ်စီး ဂြိုဟ်နင်းထဲ ရောက်နေလဲကို မသိဘူး
နှစ်ခု သုံးခုမက တပြိုင်တည်း လုပ် လုပ်နေရတယ်
အားလုံး Sentosa Project တွေချည်းပဲ
တစ်ခုပြီးလို့ Approval အတွက် တင်လိုက် comment ပေးပြီး ပြန်ချပေးလိုက်
နောက်တစ်ခု လုပ်နေရာကနေ အဟောင်းကို ပြန်ကိုင်လိုက် ခဏနေ Manager က လာပြီး နောက်တစ်ခု အကြောင်း လာမေးလိုက် ... လုပ်လက်စကို ဘေးဖယ်ထားပြီး သူနဲ့ ပြောလိုက်... ပြီးသွားလို့ ဆက်လုပ်လိုက်ဦးမယ်လို့ ပြင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ... ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘာလုပ်နေတာလဲ ဆိုတာ မသိတော့ဘူး
ချာလပတ်ရမ်းတယ် ဆိုတာ အဲဒါပဲနေမှာ
အရေးထဲ ကိုင်နေတဲ့ project တွေက အားလုံး Santosa ဖြစ်ရုံ မက...လမ်းနာမည် တွေပါတူတော့ ဘယ်လို မှတ်ရမှန်းကို မသိဘူး... Manager ကတော့ plot no. တွေ အကုန် အလွတ်ရပြီး ...ဟေး B18, B7 စသဖြင့် လာလာပြောရင် အက္ခရာတွေ ဂဏန်းတွေ မှတ်တာ ညံ့လွန်းတဲ့ ကိုယ်က ဘာက ဘာမှန်းကို မသိတာ...
အဲဒါကျ GM နဲ့ ကိုယ်နဲ့မှ ကွက်တိ .."မင်းကို မနေ့က ငါပြောတဲ့ ပုံဟာလေ... roofing က ဒီလို ဒီလို ဒီလို " ဆိုပြီး လက်ဟန် နဲ့ ပုံဆွဲပြလိုက်တာ မျက်လုံးထဲမှာ တန်းကနဲပဲ...
တခါတခါတော့ "cantilever ကို 50x50 သုံးထားတဲ့ ပုံဟာလေ" ဆိုပြီး unique ဖြစ်မယ့်ဟာကို ရွေးပြောတတ်တယ်..
ကြည့်ရတာ သူလဲ ကိုယ်လိုလူမျိုးပဲ... Main Con ကနေ တဆင့် Consultant ဆီက comment လာပြီဆို.. ok ဒါ ဒီလို လုပ်လိုက်ဆို တစ်ခွန်းပဲ
Manager ကျ တမျိး ဆရာ
Standard Size က ဒီလောက်လာမှာ.. Miss Ko, မင်း ပုံက length ဒီလောက်ပဲ ထားရလား ... U draw & draw & calculate & calculate, again & again ... but u never think about cost တဲ့...ဒါနဲ့ပဲ Consultant’s comment ကို GM နဲ့ လက်ဝါးရိုက်ပြီး amend လုပ်ထားတာတွေ အစက ပြန်ပြင်ပဲ...
Manager ပြောနေကျ စကားက Ohhhhh.... so many wastage! တဲ့
လူကြီးဟာ လူကြီးပဲနော်...အင်ဂျင်နီယာပိုင်းတင် မဟုတ်ဘဲ အားလုံးကို ခြုံငုံမြင်နိုင်နေတော့တာ
ဗျာများရပေမယ့် ပညာလည်း အများကြီး ရပါရဲ့
စိတ်ရှုပ်ရပေမယ့် ဒီလို အလုပ်ရှုပ်တာကို ကျေလည်းကျေနပ်ပါရဲ့
အလုပ်ထဲမှာ ခေါင်းပူရပေမယ့် ပြန်လာရင် လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး နေတာပဲ
အမယ် BreadTalk မှာ ဒီနေ့ မုန့် အသစ် ထွက်တယ် ဆရာ
ရိုးရိုး ပေါင်မုန့်ထဲမှာ ၀က်ပေါင်ခြောက်လေးတွေ အခွေလိုက် ထည့်ပြီး ကိတ်လိပ်လို ပုံစံ လုပ်ထားတာ
Casher နားမှာ ပြထားတာ ဆိုတော့ ငွေရှင်းဖို့ တန်းစီရင်း အဲဒါကို ကြည့်မိတယ်
ပြီးတော့ မအောင့်နိုင်ဘဲ ရီမိပါရော ..
နာမည်က "Crouching Tiger & Hidden Bacon" ဆိုတာကိုး..
ကိုယ် ရီတော့ ရှေ့က လူ ၂ ယောက်က မသိမသာ လှည့်ကြည့်တယ်
ဒါနဲ့ Serve လုပ်ပေးနေတဲ့ staff ကို လှမ်းပြီး ဒါက new product လား ဘာညာနဲ့ အရှက်ပြေ (သို့သော် don't care ပုံစံနဲ့) စကားပြောရတယ်
အလုပ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ရှုပ်ရှုပ် ကိုယ့်အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိနေရင် Stress ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ ခဏပါပဲ
(P.S : Manager က အသက်ကြီးကြီး...၆၀ နီးပါး... GM ကတော့ လူလတ်ပိုင်း under 40 လောက်ပဲ ရှိဦးမယ်)
Correction: 1) လပ်ရားလပ်ရား to လတ်လျားလတ်လျား။
2) Casher to Cashier
Cashier အား ပြင်ပေးသော အခန်းဖော် အစ်မ နှင့်
လတ်လျားလတ်လျား အား gtalk မှ လှမ်းပြင်ပေးသော တိုတိုဆရာ ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ :) :) :)
Posted by Rita at 11/28/2008 10:41:00 PM
Labels: experience, Singapore, Work
Sweep Sweeper Sweepest !
Second Time to East Coast
မင်း နဲ့ ကိုယ်